မြဝတီမြို့နယ်တွင် မိုးများစွာ ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားတစ်စင်းနှင့် ကတ္တ? - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့နယ်တွင် မိုးများစွာ ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ကျေးရွာချင်းဆက် တံတားတစ်စင်းနှင့် ကတ္တ?
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့၌ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်က မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုနှင့် တောင်ကျရေများကျဆင်းခဲ့မှု ကြောင့် ”ထီးဝါပလော”ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ”ကော့ကော်”ကျေးရွာ အုပ်စုတို့အားဆက်သွယ်ထားသည့် တံတားငယ်တစ်စင်းအပါအဝင် အရှည်ပေ ၃ဝ၊ အကျယ် ၁၈ ပေ ရှိ ကတ္တရာလမ်းသားမှာလည်း ရေ တိုက်စားပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက် ဒေသခံများယာယီသွားလာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တံတားနှင့် လမ်းပျက်စီးမှု ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်းမပြတ်တောက်စေရန် မြဝတီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထူးလွင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင် နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူ မျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးတို့က ဇူလိုင် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကာ ဒေသခံများက လမ်းပျက်စီးသွားသည့် နေရာ၌ သစ်လုံးများဖြင့် ယာယီတံတားတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
”ဒီလမ်းမှာ ထီးပါပလော၊ ထီးလော့သေ၊ ကျော်ခို့၊ ကွီးလေး ကော့ကော်၊ ကုန်းမလေး၊ သိကတီ၊ ထိုးသူခီး၊ တရိဂျိုး၊ မဲပလဲ့ဝါးခီး၊ ဒေလော့ဖျာအစရှိတဲ့ ကရင်တိုင်း ရင်းသားကျေးရွာတွေ တည်ရှိကြ ပြီး မြဝတီမြို့နယ်၊ ကော့ကရိတ် မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားသလို တံတားငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုရေတိုက်စားပျက်စီးသွားတဲ့အထဲမှာ တံတားငယ်တစ်စင်းလည်း ပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်မှုတွေ မပြတ်တောက် စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။ ရွာသားတွေကလည်း ပူး ပေါင်းပါဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးကြသလို နယ်မြေခံနယ်ခြားစောင့်တပ်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်”ဟု မြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။ အဆိုပါ ထီးပါပလောကျေး ရွာအုပ်စုနှင့်ကော့ကော်ကျေးရွာ အုပ်စု ကျေးရွာချင်းဆက်ကတ္တရာ လမ်းပိုင်းမှာ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုငွေ လုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သောလမ်းပိုင်းဖြစ်သည်။
မိုးများသောကြောင့် ပဲတီစိမ်း အထွက်နှုန်း လျော့ကျပြီး ဈေးမရသဖြင့် တောင်သူများ စိုက်ပျိုးစရ